မင်္ဂလာ #tweetsgiving နှင့် #indytweetsgiving | Martech Zone
မင်္ဂလာ #tweetsgiving နှင့် #indytweetsgiving
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 24, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပြန်ပြောင်းကြည့်ပါကအံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ဘုရားအားပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘဲအားလုံးအတွက်အားလပ်ရက်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပါဘုရား။ ဒီနှစ်ငါနဲ့ငါ့မိသားစုကိုတကယ်ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ် ငါ့သားနဲ့သမီးကငါ့ဘဝမှာရရှိခဲ့တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်တွေ။ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖခင်မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြောင့်အခွင့်အလမ်းများပျောက်ဆုံးနေသော်လည်းကျွန်ုပ်ခံစားရသောခံစားချက်မှမယူနိူင်ပါ။ ငါမနက်ဖြန်လုံးလုံးဆုံးရှုံးသွားရင်ငါ့ကလေးတွေကငါ့မျက်နှာကိုအပြုံးတွေဆက်ပြီးနမ်းနေကြလိမ့်မယ်။
ငါဒီနှစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်လူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစာရင်းတစ်ခုကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြောက်သည်။ ၅၀ ခန့်အကြာတွင်ငါတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမေ့သွားလိမ့်မည်ဟုချွေးစပြုလာသည်။ ငါနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုရှိတယ်။ ငါပြောရမယ် ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း၏, Mark Ballard အခေါက် Mallard ထံမှ Jason Carr က အဆိုပါ Bean ကိုဖလား။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကငါ့ကိုအားပေးခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုအခက်တွေ့စေတယ်၊ ​​ပိုကြီးပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အားပေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူကောင်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပါ၊ အမြဲတမ်းအောင်မြင်မှာပါ။
PS: Mark ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတဲ့နောက် San Diego ကိုပြန်လာနေတယ်။ Mark ကိုလွဲချော်သွားမှာပါ။ Indianapolis မှာသူ့စီးပွားရေးကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အရမ်းများလွန်းတဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
လူအများနားထောင်ပြီးမပါ ၀ င်လျှင်ဘလော့ဂ်သည်အမြဲတမ်းလိုပဲဘလော့ဂ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ အစဉ်မပြတ်ကြီးထွားလာ၏စာဖတ်သူအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် Martech Zone နှင့်ဤနေရာတွင်အရည်အသွေးမြင့်တင်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသံများပေးသောဘလော့ဂါအသစ်များအတွက်။
ငါ Chris Baggott နှင့်ကျေးဇူးတင်စကားမပါဘဲဒီ post ကိုလုပ်လို့မရပါဘူး အကျဉ်းချုပ်။ သူတို့ပံ့ပိုးမှုမပါဘဲနဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုငါစနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပိုင်းတွင်ငါရေးသောစာအုပ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့် Wiley နှင့်မိတ်ဆက်ပေးမှုအတွက် Kyle Lacy ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Chantelle Flannery စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာအုပ်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီခြင်းအတွက်!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရိုင်ယန်ကော့ #tweetsgiving အတွက်ပိုက်ဆံစုဆောင်းဖို့အတွက်ဒီအကြံအစည်ကိုရှေးရှေးတွေဆီဘယ်သူပေးခဲ့လဲ TweetsGiving သည်ကမ္ဘာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စိတ်ဖြင့်ပြောင်းလဲစေရန်ကြိုးပမ်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခမ်းအနားဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄? ၂၆၊ ၂၀၀၉ တွင်အမေရိကန်မှအကျိုးအမြတ်မယူသော Epic Change မှပြုလုပ်သောဤ ၄၈ နာရီပွဲသည်သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းကိရိယာများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန်အားပေးလိမ့်မည်။ လူများကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကျင်းပသောအဖြစ်အပျက်များတွင် cause ည့်သည်များအားဘုံအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကိုပြောပြရန်ဖိတ်ကြားလိမ့်မည်။
Indianapolis ရှိသင်တို့အဘို့, အားဖြင့်ရပ်တန့် Scotty ရဲ့ Brewhouse ယနေ့ည Indianapolis မြို့လယ်မှာပိုက်ဆံများများတက်လာမယ့်နေရာ။
99designs နှင့်အတူ Crowdsourcing ဒီဇိုင်း
24:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 37
Doug ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောခဲ့သလိုပဲပထမ ဦး ဆုံး၊ ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သို့သော်အရေးကြီးသည်မှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြောင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှကောင်းချီး ပေး၍ ကျေးဇူးတင်သင့်ကြောင်းအမြဲသက်သေပြနေသည်။ ခင်ဗျားရဲ့ခင်မင်မှု၊ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ #indytweetup #indytweetsgiving #tweetsgiving နဲ့ထပ်မံပံ့ပိုးမှုတို့ကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။ သငျသညျယောက်ျားလေးများအကြားလူတဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်!
24:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 6, 10
25:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 40
ငါဒီနှစ် #tetsetsgiving မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ။ အထူးသဖြင့်မင်းရဲ့ကလေးတွေနဲ့မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုငါကြိုက်တယ် သူတို့အဖေကိုတော်တော်ဂုဏ်ယူနေပုံရတယ်။ သင်၌အလွန်ကောင်းမွန်သောကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
25:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 59
မင်္ဂလာပါ Doug! ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်ရေးသားသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်နှင့်သင်၏ကြင်နာမှုနှင့်ရက်ရောမှုအတွက်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။